» द लुक” फेसन सो आयोजना गर्ने
द लुक” फेसन सो आयोजना गर्ने
६ आश्विन २०७८, बुधबार १०:१९
काठमाडौं – ट्रेवल फेसन कन्सर्न प्रालीद्वारा (Treble Fashion Concern Pvt. Ltd.) द लुक” फेसन सो आयोजना गर्ने भएको छ ।कार्यक्रम ट्रेवल फेसन कन्सर्न प्राली आयोजक रहेको छ भने काठमाडौं स्थित गोकर्णश्वर नगरपालिकाले कार्यक्रममा सहकार्य तथा समन्वय गरेको छ ।
विगतमा पनि यस ट्रेवल फेसन कन्सर्न प्रालीले फेसन तथा ग्याल्मर सम्वन्धित धैरै कार्यक्रमहरु आयोजना गरिसकेको छ ।जसमा फेसन सो कार्यक्रम अन्तर्गत मिस डिवाइन ब्युटी नेपाल २०२१ र मिसेस गोकर्णश्वर पेजेन्ट नेपाल २०२१ नामक फेसन प्रतियोगिताहरु सम्पन्न गरिसकको छ ।
कार्यक्रम कुनै प्रतिस्पर्दा भन्दा पनि यो फेसन इभेन्टको रुपमा आउदै गरेको दशैको घटस्थापना पर्षिपल्टअसोज २३ गते हुनेछ । यस कार्यक्रमा विशेष रुपमा विवाहित तथा अभिवाहित युवतीहरु सहभागि जनाउन सक्ने छन् । फोटो सुटमा करिव ३० जना सहभागि भैरहेको कार्यक्रमका संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको पहिलो ईभेन्टको रुपमा पहिलो चरणको फोटोसुट कार्यक्रम भैसकेको अव दोस्रो चरको फोटो सुट असोज ०९ गते हुने छ । ।साथै अन्य ईभेन्ट दुई तिन दिन पछि ट्रेनिङ कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रमा सहयोगको रुपमा टिवेटन इन्टरन्यासनल होटेल, बेली फोटोग्राफी लगायत अनलाई मिडिया पाटनरको रुपमा डिजिटल खवर तथा सपोर्टको रुपमा पपकन मिडिया रहेक छन् ।
कार्यक्रममा अवरसरमा फेसन सो, संगित, आधुनिक नृत्य, साँस्कृतिक नृत्य, नाटक लगायत अन्य प्रस्तुतिहरु हुने छ । कार्यक्रमको उद्धेय भनेको महिला दिदि बहिनीहरुलाई अवसरको साथै मोटिभेसनको लागि पनि हो उनले भन्नुभयो । नयाँ मोडलिङ,फिल्म,म्यूजिक क्षेत्रमा आउने चाहाना भएको व्यक्तिलाई अवसर रुपमा लिन सकिन्छ ।
एट्लाण्टाबाट चन्द्रको कोशेली ‘एकै नजर’ ( भिडियो )
किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक, किन विमानस्थलबाटै फर्काइए ?
दुर्घटनामा परी नायिका ईश्वरीको निधन
विपना र मण्डल अभिनित ‘यो माया होइन र’ सार्वजनिक ( भिडियो )